Fifehezana aretim-biby :: Kisoa enim-polo mahery nodorana sy nalevina • AoRaha
Mpiompy iray no tratra nitondra kisoa telo amby enimpolo nitsoaka an’Ambilobe, distrika izay hiparitahan’ny valanaretina pesta kisoa, afak’omaly.
Avy any Ambilobe ireo biby fiompy ireo raha ny vaovao voaray. Efa noraisina ny fepetra rehetra mba hisorohana ny tsy hampihanaka an’izany aretim-biby izany amin’ny faritra hafa ka nodorana haingana ireo kisoa am-polony ireo.
“Nokasaina hoentina any Antananarivo ireo biby. Efa noroahina tamin’ny lalana lavidavitra izay vao nampiakarina tao anatin’ny fiarabe saika nitatitra azy no nisy nahatsikaritra. Nanao sakana avy hatrany kosa ny Zandarimariam-pirenena raha vao naharay ny vaovao. Tany akaikin’i Befotaka no tratra izy ireo”, hoy ny fanampim-baovao avy amin’ny Zandarimariam-pirenena any amin’ny faritra Sofia, omaly.
“Omaly (ndrl afak’omaly) no nisy nampahafantatra mikasika an’io vaovao io ny Ben’ny tanàna ao Befotaka. Niantso ny borigadin’ny Zandarimariam-pirenena avy hatrany ity farany mikasika ny fisian’ireo kisoa roa amby enimpolo avy any Avaratra ireo”, hoy i Talentino Hilaire, Ben’ny tanànan’ Analalava, kaominina iray mifanakaiky amin’i Befotaka. Nandika ny didim-pitondrana nivoaka tamin’ny volana janoary, mandrara ny fivoahan’ny kisoa any Ambilobe noho ny fisian’ny pesta kisoa any an-toerana no antony nanagiazana an’ireo kisoa ireo sy ny mpitondra azy.
Notsindronina poizina avy hatrany ireo biby ireo ho faty rehefa natao ny fizahana satria noahiana sao hanaparitaka ny aretina tany Befotaka. Nodorana ireo kisoa rehetra, taorian’izay ka nalevina izay sisa tsy may. “Tokony ho nogiazana amin’ny toerana fanaraha-maso ireo biby ireo. Tsy maintsy novonoina anefa satria efa nisy namoy ny ainy aza ny ankamaroan’izy ireo tao anatin’ilay fiara nitondra azy”, hoy indray iry loharanom-baovao avy amin’ny Zandarimariam-pirenena iry. Voasoroka, araka izany, ny mety ho fiparitahan’ny aretina satria nogiazana ihany koa ilay fiara.
Nahatrarana taratasy vita sonian’ny tompon’andraikitry ny fiompiana ao Befotaka, tamin’ny 18 febroary 2019, ireo kisoa ireo. Voalaza fa efa nametra-pialana tamin’ny 1 febroary 2019 anefa io olona nanao sonia io. “Olona dimy no hanaovana fanadihadiana mikasika an’izao raharaha izao. Ankoatra ny tompony, dia voarohirohy miaraka amin’izy ireo ny mpamily fiara sy ireo izay nanome alalana azy nivoaka tany Ambilobe. Marihina fa mbola manan-kery iry didim-pitondrana iry, hatramin’izao”, hoy indray ny fanampim-panazavana avy amin’ny zandary.
Efa hatramin’ny fiandohan’ny volana janoary no voalaza fa nandripaka biby fiompy maro tany Ambilobe io pesta kisoa io. “ Tsy mifindra amin’ny olombelona ilay aretina. Ny fiparitahany amin’ny biby izay ahiana hiteraka fatiantoka ho an’ny mpiompy no tena anton’ny fandraràna”, hoy ny fanampim-panazavana avy amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono.
Fiahiana ny zokiolona :: Beantitra an-jatony hahazo tohana ara-pitsaboana
Fitsinjovana :: Nizaràna haraton’aina ny mpiasan’ny Kraomita malagasy